जुन 18, 2019 जुन 19, 2019 साइन्स इन्फोटेक6Comments डा. राम बहादुर बोहरा, मन्त्र
लामो यात्रापछि जब हामीलाई थकाई लाग्छ त्यति बेला दुखाई हटाउन हामी प्राय औषधि सेवन गर्दछौं । आज मैले मन्त्रद्वारा थकाई मेटाउने तरिकाबारे प्रकाश पार्ने जमर्को गर्दैछु । यो वैज्ञानिक युगमा पनि यस्तो सम्भव छ, भन्नु होला तर मैले जे देखे त्यो पाठकको जानकारीका लागि यहाँ पस्कन गइरहेको छु ।
हामी नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौं । हामीलाई मन्त्रमा पनि औषधि जस्तै काम गर्ने सक्ति छ र भन्ने प्रश्न उठेको देखिन्छ । आज प्रकृतिले जसरी हामीलाई मानव रूपी शरिर हामीलाई प्रदान गरेको छ, त्यसरी नै जडिबुटी देखि मन्त्रसम्म दिएको पाइन्छ । हामी यति अल्छी भयौं की स्वास्थ्यमा ध्यान नदिन पेन किलर औषधि किनेर खाइहाल्छौं तर यस्को असर बारे अनभिज्ञ छौं ।
हरेक बस्तुको आफ्नै वैज्ञानिक मान्यता बोकेको हुन्छ । यहाँ कसैले औषधि जस्तो ठूलो अरू केही छैन भन्छन् भने मन्त्रले पनि औषधि भन्दा ठूलो काम गर्छ भनेको छ । कुनैपनि बस्तु प्रति जबसम्म विश्बास हुदैन तबसम्म केहिले पनि ठिक नहुने भनेको छ ।
हामीले हरेक विषयमा विश्वास गर्नु राम्रो हो । आज हामीले यसै विषयमा कसरी लाभ उठाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा प्रकाश पार्नेछु । रोगलाई प्रकृतिले चुनौती दिन थालेको छ । जति-जति हामीले प्रकृतितर्फ ध्यान नदिएर अप्राकृतिक ढंगबाट उपचार गर्दैछौं यसलाई प्रकृतिले पनि चुनौती दिन थालेको छ ।
रोग लाग्नु भन्दा रोग नै लाग्न नदिनु ठिक हो । हामीले आफ्नो स्वास्थ्यप्रति समयमा ध्यान दिन सके ठूलो उपलब्धि हुने देखिन्छ । आज जसरी धर्म संस्कृतिलाई पन्छाउने कोसिस गरिएको छ त्यसरी नै हामीले तन्त्र मन्त्रलाई समेत पन्छाउने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । आज हाम्रो जंगलमा यस्ता अनेकौं चम्तकारीक जडिबुटी छन् जसलाई सहि समयमा प्रयोग गर्न सके ठूलो उपलब्धि हुनेछ ।
मन्त्र प्रयोग गर्ने विधि
बाहिरबाट आउनासाथ खुट्टालाई चिसो पानीले राम्रोसंग धुनुहोस् धोइसकेपछि “ॐ वासुदेवाय नम:” भन्दै सातपटक मन्त्र पढी पैतालामा हात फेर्नु क्रमश: थकाई समाप्त हुन थाल्दछ । हेर्दा साधारण छ तर यसको प्रयोगले फाइदा देखिन थाल्दछ ।
← सलहेश फूलबारीको फूलको वैज्ञानिक आधार के त ?
नुहाईधुवाई गरेर मात्र खाना खानुपर्छ भन्ने हिन्दु मान्यताको वैज्ञानिक कारण के ? →
नोभेम्बर 16, 2018 साइन्स इन्फोटेक 0
6 thoughts on “के थकाई मन्त्रले ठिक हुन सक्ला ?”
Pingback: सफलताको तान्त्रिक रहस्य
Pingback: कलियुगमा भगवानको खोजी
Pingback: मन्त्रद्वारा के रोग ठिक हुन सक्छ ? आजको युगमा मन्त्रमा विश्वास गर्ने कि नगर्ने
Pingback: के मन्त्र तन्त्रद्वारा पनि रोगको उपचार हुनसक्छ ? यसको अनुसन्धान गर्न आवश्यक